Archive du 25-mai-2022
Fitantanana Mamotika firenena ny andrakandrana
Efa nitondra tetezamita 5 taona ny Filoha Andry Rajoelina. Nilaza fa vita ny nampandeha ny fiainana teto na tsy nisy famatsiambola aza.
ADY ANY UKRAINE AN’ALINY MATY TAO ANATIN’NY 3 VOLANA
Telo volana katroka omaly talata 24 may 2022 ny ady any Ukraine. “Opération spéciale” no nitondran’ny Rosianina azy tany am-boalohany, ary nambara tamin’izany fotoana izany fa ao anatin’ny andro maromaro ny hakany an’ity
Antoko MONINA Nahatsiaro an-dRabearimanana, mitony tolona
Herintaona izao no nandaozan’ny Profesora Rabearimanana Gabriel antsika, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika MONIMA nahatsiaro ny 25 mey 2021. 76 taona feno dia feno satria vitany tamin’ny fomba mendrika sy azo atao
Fiaraha-miasa amin’ny BAD Tetikasa 3 hovatsiana 3,8 tapitrisa dolara
Tontosa tany Accra Renivohitr’i Ghana alatsinainy 23 mey 2022 lasa teo ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny governemanta Malagasy, izay nosoloan’ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola Rtoa Rabarinirinarison
Fanafihana Cash point Nijininika ny rà omaly hariva tetsy amin’ny 67 ha
Tsy matin’ireo jiolahy eto an-drenivohitra lolo mihitsy ireo mpanao cash point eto amintsika. Amin’ny ankapobeny mantsy dia heverin’izy ireny ho any amin’ireny olona ireny ny volabe maty nandritra ny tontolo andro sy ny renivola
Madagasikara Tsy handroso raha tsy voafehy ny harena eto
Olana ho an’i Madagasikara ny tsy fahafehezana ny sehatra tokony ho laharampahamehana, kanefa ny fitantanana sy fanomezana hasina ny harena tsy tena tafapetraka.
Fampiakaran-karaman’ny tsy miankina Hivoaka ny didy, hanao ahoana marina ?
Raha ny 01 mey no nanaovan’ny Filoham-pirenena fandaharana momba ny fampiakaran-karama ho an’ny mpiasam-panjakana sy ny mpiasa tsy miankina, ary hihatra avy hatrany amin’ity volana may ity izany,
La Réunion kely Mijaly amin’ny hatsiaka sahady ny mponina
Manomboka miditra mian-dalana ao anatin’ny vanim-potoanan’ny hatsiaka isika ankehitriny. Na izany aza efa tena mamirifiry tanteraka izany antony mampahazo vahana ny aretin’ny taovam-pisefoana toy ny kohoka,
Shincheonji - Fiangonan’i Jesoa Nahavita namondrona mpanome rà 18 000
Vondrona mpanome rà 18.000 no nanampy tamin’ny fifehezana ny famatsian-drà tany Korea Atsimo. Nanjaka maneran-tany ny tsy fahampian’ny famatsian-drà noho ny Covid-19. Tamin’ny volana Janoary,
EPP hafahafa Tsy maintsy mitondra kitay ny mpianatra vao afaka mianatra
Hafakely ny fanaporetana mahazo ireo mpianatry ny EPP ao Befatotra, distrikan’i Sambava. Tsy mahazo mianatra toy ny mahazatra mantsy ny mpianatra ao amin’ny taona faharoa raha tsy mitondra kitay hazomainty ho an-dRamose
Fidirana ho polisy Nahemotra amin’ny 9 sy 10 jolay ny fanadinana
Nahemotra amin’ny 09 sy 10 jolay ho avy izao ny fotoana hanatanterahana ny fanadinana hidirana ho polisim-pirenena eto amintsika.
Kristianina mandinika raharaham-pirenena “Mila fandriampahalemana hamokarana fa ny vola tsy azo hohanina”
Tsorina fa mbola tsy mahaleontena ara-tsakafo I Madagasikara, hoy ny Kristianina mandinika raharaham-pirenena, Ralaiarimanana.
Andranovelona-Ankazobe RN 4 Miitatra hatrany ny fahasimban’ny lalana
Miitatra hatrany ny fahavoazan’ny lalam-pirenena fahaefatra. Manomboka etsy Andranovelona dia efa feno lavadavaka ny arabe ka hatrany Ankazobe.
AZA MIREDIREDY NAMA A
Maro amin’ireo orinasa tsy miankina no mbola tsy afaka nanondrotra ny karama,Efa mazava ny antony fa miaina anaty krizy ny firenena, sy izao tontolo izao mihitsy.
TENY GASY Tamin’ny andronay, tsy nisy an’izany
Rehefa miresaka amin-janako (19 sy 16 taona) aho dia matetika mahateny hoe «Ka tamin’ny andronay, tsy nisy an’izany». Ilay «andronay» resahako amin’io, ny taona 1980-1990, nitovizako «génération» aminy ankehitriny.